पर्सामा थप ५५ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि - Yatra Daily
Home Headline पर्सामा थप ५५ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
वीरगञ्ज २६ श्रावन । पर्साको समुदायस्तरमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणले त्रास मचाएको छ । श्रावनयता सुरु भएको सङ्क्रमित थपिने लहर अहिलेपनि रोकिएको छैन । सोमबार राति फेरी थप ५५ जना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
बिहान मात्रै २२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । नारायणी अस्पतालको पिसिआर प्रयोशालाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार सोमबार राति थप ५५ व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै पर्सामा सोमबार ७७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
सोमबार रति थपिएका सङ्क्रमितमा नेपाल प्रहारीका जवान र स्वास्थ्यकर्मीपनि रहेको नारायणी अस्पतालको स्रोतले जनाएको छ । १६ महिला रहेका थपिएका सङ्क्रमितहरुमा ५ वर्षका बालकदेखि ८६ वर्षका वृद्धसमेत रहेका छन् ।
सङ्क्रमितमा वीरगञ्जस्थित वडा प्रहरी कार्यालय विर्तामा कार्यरत ८ जना प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा कार्यरत १ जना गरी ९ जना प्रहरीमा रहेका छन् । त्यस्तै नारायणी अस्पतालको बाल चिकित्सा विभागमा कार्यरत २ जना र ओपीडी विभागमा कार्यरत २ जनागरी ४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
थपिएका सङ्क्रमित मध्ये केहि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर र स्वेच्छाले आफ्नो परिक्षण गराएका मध्ये रहेको नारायणी अस्पतालका मेसु डा. मदनकुमार उपाध्यायले बताए । उनले थपिएका सङ्क्रमित मध्ये केहिमा लक्षण समेत देखिएको जानकारी दिए ।
सोमबार राति पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरु वीरगञ्ज महानगरपालिको विर्ता, छपकैयाँ, माइस्थान, मुर्ली, भिस्वा, आदर्शनगर, राम टोल, रेशमकोठीका रहेका छन् । यस्तै, पर्साको धोबनी गाउँपालिकाका एक जना, पर्सागढी नगरपालिकाका ३ जना, पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाका १ जना, जिराभवानी गाउँपालिकाका १ जना, पकहामैनपुर गाउँपालिकाका २ जना, अमरपट्टिका ३ जना संक्रमित थपिएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदन उपाध्यायले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बारा जिल्लाको विश्रामपुर गाउँपालिकाका १ जना, नकटुवा बाराका १ जना, पथलैयाका १ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
Previous articleलामो दूरीको यातायात र हवाई उडान भदौ १५ गतेसम्म रोक लगाउने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय
Next articleपक्राउ परेकाका नेवि संघका नेताले हिरासतमै सुरु गरे आमरण अनसन